Twitter Mutengo Faux Pas | Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Svondo, Nyamavhuvhu 2, 2015 Adam Mudiki
Kune uyu mukomana mumwe chete pa Twitter asingateveri uye anonditevera pane zvinoita senge vhiki nevhiki. Ini ndinofunga anotenda kuti ndichaerekana ndamutevera (sezvo ini ndisina 27 yekupedzisira nguva yaakaedza.). Anofanira kufungidzira kuti ndakagadzira account yangu kana kuti ndiri gwai rinodzvanya tevera pane chero ani anonditevera.
Ini handina kumutevera kumashure kekutanga nekuti ndakatarisa nguva yake uye hapana chandakaona chakanangana neni. Hazvireve kuti aitaura chero chinhu chakaipa kana kuti iye ari kusundidzira porn. Ini handifarire chigadzirwa chaari kushambadza, haasi mumunda mangu, haataure chero chinhu chandinoona chiri chinonakidza kure, uye haasi wepano - maitiro ese andinoshandisa kusarudza kuti ndotevera here mumwe munhu kana kwete. (Haufanire kuzadzisa zvese zvinotarisirwa, chete chete.)
Ini handina manhamba makuru ekuchiva, asi saka chii? Ini handidi makuru manhamba chete nekuti kwakanaka. Zvisinei, parizvino ndangosiya mukomana wacho. Muchirongwa chese chezvinhu iko kungori kutsamwa kudiki senge umhutu uhwo hwakaonekwa kubarbeque. Asi ndicho chinhu - ini ndave kutanga kuona murume uyu sechinhu chinopfuura humhutu.
Muchokwadi, akadaro kukuvadza zita rake nemumwe munhu zvekuti anoita kunge akashuvira kwazvo kuteya. Ndichiri pekutanga ndakamuona semunhu ane bhizimusi repamutemo aine chigadzirwa chakangonaka chisina kungondifadza, izvozvi ndinomuona sedombo remhuka randisingazombokurudzira kumweya.
Izvozvi zvandakabvarura, rega ndikubvunze mubvunzo, anodiwa muverengi. Kana iwe wakazvipira kushandisa Twitter senge zano rekuvaka-chiratidzo, ndedzipi hunhu iwe hwaunotenda kuti hunogona kukuvadza chiratidzo chako?
Kwidziridzo: Ndisati ndawana mukana wekutsikisa ichi posvo, mushandisi weTwitter ari mubvunzo anofanira kunge akaona maRed angu maTweets nezvake. Akavhara me. Ndiri kungoseka.
Tags: maitiro akaipa twittertwitter kukanganisatwitter teveratwitter zvikanganiso
Zvidzidzo zvishanu uye Chakavanzika Chikuru kuBlogging Zvikurumidza